Treasure 7x7 | बोनस स्लट अनलाइन | CoinFalls अनलाइन क्यासिनो
खजाना7एक साहसिक मा जान तयार प्राप्त×7. यो सबै भन्दा राम्रो को छ बोनस स्लट अनलाइन एउटा अचम्मको समुद्री डाकू विषय भइरहेको. यसलाई स्पष्ट नीलो समुद्र र सेतो बलौटे बीच एक समून्द्रतट मा सेट गरिएको छ. यो डिजाइन र सबै भन्दा राम्रो केही बनाउनको लागि प्रसिद्ध छ जो जो जुन kinase द्वारा विकसित गरिएको छ बोनस स्लट अनलाइन उद्योग मा. You can even win up to £200,000 bonus prize by the end of your round. यसलाई मा शुरू भएको थियो 2016 र एक विशाल खेलाडी आधार भएदेखि प्राप्त गरेको छ. यसलाई मूल्याङ्कन ध्वनि प्रभावहरू माथि स्पष्ट र कुरकुरा दृश्यहरू सबै कुरा छ 16 जीत विभिन्न तरिकामा. त्यसैले आफ्नो झोला र बोर्ड सबै भन्दा राम्रो को एक मा आफ्नो साहसिक सुरु गर्न जहाज समुद्री कि प्याक बोनस स्लट अनलाइन.
खजाना7को लागि हंट सामेल×7 यो एक र मात्र बोनस स्लट अनलाइन मा
यो स्लट खेल धेरै सजिलो इन्टरफेस छ र ग्राफिक्स पूर्ण विषय फिट डिजाइन गरिएको छ. स्क्रिनमा, तपाईं दुई टेबल एक समुद्र किनारमा विरुद्ध सेट देख्ने. पहिलो तालिका7छ×7 हीरे जस्तै विषय सम्बन्धित नक्काशी छ कि फरक बक्से संग तालिका, मोती, समुद्री डाकू टोपी, खोपडी, घन्टी, जहाज झण्डा र पनि एक समुद्री जहाज. अन्य तालिका मा, संग प्रश्न तिनीहरूलाई निशान यी केही काठ ढोका हो. त्यहाँ छन् 12 कुल ढोका. मा7प्रत्येक लाइन×7 बक्स मा लेखिएको विजेता रकम छ. विकल्पहरू सक्षम / ध्वनि र अटोप्ले असक्षम जस्तै खेलाडी गरेको सुविधाको लागि दिइएको. यो RTP वा यो को payoff दर अधिकतम सम्म पुग्न सक्दैन 89.90% जो अन्य तुलना मा विशाल छ बोनस स्लट अनलाइन.
गेमप्ले बारेमा सबै
यो स्लट को गेमप्लेको साँच्चै सजिलो छ. त्यहाँ दुई टेबल छन्, को छ कि एक 49 बक्से र एक छ 12. सुरु मा तपाईं क्लिक गरेर आफ्नो शर्त सेट गर्न आग्रह गरिने + र – विकल्प. यो पछी, तपाईं चयन गर्न7को बाहिर 12 बक्से. प्रत्येक बक्स प्रतीक प्रकट हुनेछ. प्रतीकको मा7मेल खाने भने×7 ग्रिड, बक्समा हाइलाइट प्राप्त हुनेछ र प्रतीक सूची बन्द पार गरिनेछ. एक जीत बनाउन, तपाईँ या त तेर्सो मा सबै प्रतीक बन्द पार गर्न आवश्यक, ठाडो वा विकर्ण लाइन. यसको मतलब सबै7एक लाइन मा प्रतीक हाइलाइट गर्नुपर्छ. तपाईं चयन गर्न चाहनुहुन्छ भने7बक्से आफैलाई, तपाईं स्वतःप्ले विकल्प क्लिक गर्नुहोस् र सफ्टवेयर लागि त्यसो गरौं सक्नुहुन्छ.
मनोरम ग्राफिक्स, रोमाञ्चक ध्वनि प्रभाव र एक captivating गेमप्लेको यो वर्णन कुराहरू छन् स्लट खेल उचित. एक विशाल विजेता सम्भावित सबै भन्दा राम्रो बीच यस राख्दछ अर्को कारण हो बोनस स्लट अनलाइन.